USolwazi u-Pragashnie (kwesokudla) nomyeni wakhe u-Sathiesh, unina nendodakazi yakhe u-Giana Ruby.
Isifundiswa Sase-UKZN Kowamanqamu Kuma-Science Oscars
USolwazi we-Occupational Therapy e-UKZN u-Pragashnie Govender ufinyelele kowamanqamu kwi-National Science and Technology Forum (i-NSTF) South 32 Research Awards, ebuye ibizwe ngama-Science Oscars.
Imiklomelo ye-TSTF, exhaswe inkampani yezimayini nezinsimbi i-South 32, ihlonipha labo abenza kahle kakhulu kwezesayensi, ezobunjiniyela nezobuchwepheshe (i-SET) nokuqamba okusha eNingizimu Afrika. Le miklomelo ithathwa njengemikhulu nebanzi nelangazelelwa ukunqotshwa kakhulu ezweni.
Phambilini ibihlale yethulwa emcimbini omkhulu kepha ngenxa yobhubhane i-COVID-19, umcimbi wangowezi-2020 uzokwethulwa kwi-inthanethi mhla zingama-30 kuNtulikazi.
‘Ngibusisekile,’ kusho u-Govender. Ukuze okhethiwe afinyelele kowamanqamu kufanele ithimba lamajaji limbone umfanele lo mklomelo. Lokhu kusho ukuthi oqokiwe kufanele kube ube negalelo elibonakalayo kwezesayensi, ezobunjiniyela nezobuchwepheshe nezokuqamba okusha eNingizimu Afrika, abonakale engaba ngumnqobi.
Lo owayenguMholi kwezokuFundisa ezoCwaningo kwezeSayensi yezeMpilo uqokwe kusigaba i-TW Kambule-NSTF Award: Emerging Researcher.
USolwazi u-Govender walala isibili ngonyaka wezi-2018 kwi-South African Women in Science Awards, wanqoba i-NRF Research Excellence Award for Next Generation Researcher kusigaba sabantu besifazane ngowezi-2016.
USolwazi u-Govender uthi uhlale ekhuthazwa ukwesekwa ngumndeni wakhe nokumgqugquzela.
‘Indaba yami ngeyomuntu owaqala entula nezinselelo eziningi. Kungezikhathi ezinjengalezi lapho ngibona khona ukuthi ngabunjwa ngabantu abaningi engibe nenhlanhla yokwazana nabo, ikakhulukazi abantu besifazane abaphokophelelayo uma kunzima, banginika amathuba engiwatholile,’ kwengeza yena.
Amagama: uNombuso Dlamini
Owayengumfundi WaseNyuvesi u-Zakes Bantwini Wemukelwe e-Harvard
I-Webinar Ibheka Ukwenza Kwe-Afrika Kwi-COVID-19
Umfundi Wase-UKZN Ekomidini Lokuhlela Lomhlaba Le-COVID-19